112 – nambar xaalad adag marka ay naf, maal ama bey’o khatar ku jiraan
Nambarka 112 waxaa la isticmaalaa xilliga xaalado deg-deg ah ay jiraan markaas oo ay jirto khatar ku wajahan naf, hanti ama deegaan. Xaalad adag waa marka aad si degdeg ah uga baahantihid ambalaas, adeeg badbaado, booliis, badbaadada diyaaradaha, badaha, buuraha, wadaad heegan ku jira ama macluumaadka sunta. Dhammaan shaqaalaheenna SOS-tu waxay ku hadlaan ingiriis, waxayna taleefanka uga jawaabi karaan ingiriis. Haddii turjumaan loo baahdo waxaa khadka la soo gelinayaa qof seddaxaad.
Meel kasta oo aad waddanka ka joogtid waxaad nambarka xaaladaha adadag ee 112 ka wici kartaa taleefan meel yaalla ama taleefan gacanta ah. Taleefankaaga waxaa ka jawaabaya shaqaale ka shaqeeya SOS oo su’aalo ku weydiinaya si laguu siiyo caawimaadda lagama maarmaanka ah.
Tusaalooyin dhowr ah oo ku aaddan su’aalaha:
Xaggey wuxu ka dhaceen?
Muxuu yahay nambarka aad ka soo waceysid?
Shaqaalaha SOS-tu su’aalo ayey ku weydiinayaan si ay qeyladhaan ugu diraan cid sax ah iyo goob sax ah. Inta caawimaaddu soo socoto waxay shaqaalaha SOS-tu u baahan karaan in ay ku weydiiyaan su’aalo badan si ay ugu diyaariyaan, una gudbiyaan macluumaad kuwa u soo socda in ay ku caawiyaan.
Maskaxda ku hay in aad 112 waceysid oo keliya marka aad ku jirtid xaalad adag oo u baahan caawimaad toos ah. Haddii kale wicitaankaagu caawimaad ayuu ka daahin karaa dad kale oo si adag caawimaad baahi ugu qaba. Haddii aysan xaaladdaadu sidaas degdeg u ahayn waxaad beddel ahaan wici kartaa Booliiska 114 14, qeybta macluumaadka la weydiiyo ee 1177 ama nambarka macluumaadka 113 13 ee la waco marka ay dhacaan shilal waaweyn ama xaalado ad-adag.
112 loogu tala galay dadka maqalka- iyo codka ka dhaawacan
Adigaaga dhagoolka ah, ka dhaawacan xagga hadalka- ama maqalka waxaa jirta fursad aad 112 kula soo xiriiri kartid adigoo adeegsanaya qoraallo xaqgga taleefanka ah ama adeegga SMS112. Xitaa adigaaga si ku meel gaar ah uga dhaawacan xagga hadalka, tusaale ahaan ka dib marki qalliin laguugu sameeyay, si ku meel gaar ah waad u isticmaali kartaa adeegga SMS112.
Marka ay jirto xaalad degdeg ah waxaad adigaaga adeegga SMS112 horay uga diiwaan geliyay taleefankaaga gacanta sms ay la socoto warbixin dhacdada ku aaddan u diri kartaa nambarka 112. Farriinta hore waxaad si gaaban uga hadleysaa wixii dhacay iyo meesha ay ka dhaceen (degmada iyo cinwaanka). Shaqaalaha SOS-tu waxay dabadeed sms kugu soo weydiinayaan su’aalo dhameystir ah si ay u helaan macluumaad ku filan si ay caawimaad sax ah ugu diraan meel sax ah.
Adeegga SMS112 wuxuu u furanyahay oo keliya adigaaga dhagoolka ah, ka dhaawacan xagga hadalka- ama maqalka, waxaadna u baahantahay in aad ku qorantihid bogga intarneetka ee SOS Alarm. Xitaa rugaha sida guryaha ardayda, dugsiyada xannaanada, guryaha xannaanada iyo meelaha la midka ah ee ay joogaan ardayda iyo/ama shaqaalaha dhegaha la’ wey adeegsan karaan adeegga.
Halkan ayaad ka heleysaa macluumaad dheeraad ah: https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/112-for-tal--och-horselskadade/.
Nambarka macluumaadka ee 113 13 – marka ay jiraan shilal iyo xaalado ad-adag
113 13 waa nambar macluumaad oo qaran. Waxaad wici kartaa nambarka macluumaadka ee 113 13 si aad u bixisid ama u heshid warbixin ku aaddan shilal iyo xaalado khatar ah. 113 13 wuxuu kaalmo u yahay degmooyinka iyo laacibiinta kale si macluumaad loogu gudbiyo dadweynaha marka ay bulshada ka dhex dhacaan shilal iyo xaalado khatar ah. Macluumaad kasta oo lagu bixinayo 113 13 waa macluumaad la hubiyay, taas waxaa loola jeedaa in laga xaqiijiyay tusaale ahaan degmada ay dhacdadu ka dhacday. Xagga dibadda waxaad ka soo waceysaa +46 77 33 113 13.
114 14 – Booliiska marka ay dhacaan dhacdooyin aan xaalad degdeg ah ahayn
Dhammaan arrimaha aan ku saabsaneyn dembi ama dhacdooyin markaas dhacaya ama mar dhaw dhacay u wac 114 14. Waxay furanyihiin afar iyo labaatanka saac, maalin kasta sanadka oo dhan. Qofka ka jawaabaya 114 14 wuxuu ku hadlaa swiidhish iyo ingiriis.
1177 – talo-bixinta daryeelka bukaanka ee taleefanka
Wac 1177 haddii adiga ama qof xigto kuu ah ay xanuunsato, oo ay u baahato in ay la tashato kalkaaliso caafimaad ama haddii aad adigu dooneysid in aad caawimaad u heshid sidii aad daryeel sax ah ku heli lahayd. Waxaad naftirkaagu tusaale ahaan cudurrada, dawada iyo daweynta ka akhrisan kartaa www.1177.se.
1177 Vårdguiden waa goobta Swiidhan lagu ururiyo dhammaan macluumaadka iyo adeegyada xagga daryeelka iyo caafimaadka. Waxaa laga helaa barta intarneetka iyo taleefanka, waxayna furantahay habeen iyo maalinba.
Macluumaad muhiim ah oo dadweynaha ku socda
Macluumaad muhiim ah oo dadweynaha ku socda (VMA) waa digniin ku socota dadweynaha marka tusaale ahaan uu gaas fakado, dab weyn uu kaco ama uu jiro shil kale oo khatar ah. Nidaamka digniinta- iyo macluumaadka waxaa sidoo kale loo adeegsan karaa qeyladhaanta diyaar-gareynta iyo qeyladhaanta diyaaradaha haddii waddanku uu dagaal ku jiri lahaa.
Dadweynaha waxaa VMA loogu baraarujin karaa siyaabo badan
Iyadoo la adeegsanayo calaamadda digniinta Farriin muhiim ah oo dadweynaha ku socoto (VMA) oo u yeereysa doddoba-doddoba ilbiriqsi oo ay soo kala dhex geleyso 14 ilbiriqsi oo aamusnaan ah muddo laba daqiiqo ah.
Digniin lasoo marinayo raadiyaha iyo TV-ga.
Digniin ah farriin cod ah oo la soo marinayo taleefannada meelaha yaal ee aagga dhibaatadu ku dhaceyso.
Digniin la soo dirayo iyadoo sms ah oo loo soo dirayo taleefannada gacanta ee ku diiwaan gashan meesha ay dhibaatadu ka dhacday.
Digniin la soo dirayo iyadoo sms ah oo loo soo dirayo taleefannada gacanta ee aagga ku sugan.
Sidee ay tahay in uu qofku u dhaqmo haddii ay dhacdo xaalad VMA
Marka aad calaamadda maqashid ama aad heshid digniin taleefanka laguu soo mariyay waa in:
Aad akhrisaa oo aad si sugan u raacdaa tilmaamooyinka.
Gal meel dhismo gudeheed ah.
Xir albaabbada, daaqadaha iyo haweeyaha.
Dhegeyso Sveriges Radio P4 si aad u heshid macluumaad dheeraad ah.
Kanaallada SVT-ga Text-TV-ga bogga 100 ayaa lagu bixinayaa macluumaad dheeraad marka ay jirto xaalad VMA, waxaana wixii macluumaad ah oo dheeraad ah leesu tilmaamayaa bogga 599 ee Text-TV-ga halkaas oo isla farriinta raadiyaha laga akhrinayo lagu faafinayo iyadoo qoraal ah.
Si aad macluumaad u heshid marka ay jirto xaalada VMA, ha wixi nambarka xaaladaha adag ee 112, taas beddelkeeda wac nambarka macluumaadka 113 13 ama macluumaadka kala soco www.krisinfo.se.
Baaqa khatarti in ay dhamaatay
Khatarti wey dhamaatay waxaa lagu baaqayaa iyadoo la sii deynayo baaq soconaya 30-40 ilbiriqsi.
Haddii aad tihid qof swiidhishka barta?
Bogga https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/utbildningsmaterial/sfi-material/texter-pa-enkel-svenska/ ayaad ka heleysaa waxyaabo aad wax dheeraad ah uga ogaan kartid nambarka xaaladaha ad-adag ee 112. Halkan waxaad ka baraneysaa sida nambarka xaaladaha ad-adag ee 112 uu u shaqeeyo iyo goorta aad waceysid nambarka macluumaadka ee 113 13, caawimaadda laga heli karo tala bixinta daryeelka bukaanka 1177 iyo nambarka xaaladaha aan degdegga ahayn ee booliiska ee 114 14.